Adeeg horay loo sii iibiyay - Goldenlaser
Xaashida Birta Labada ah & Goynta Tuubada
Roog & Mat
Sawirro Muunad ah
Ku saabsan Golden Laser (PDF)
Adeeg Hor-iib ah
Khubaradayada ayaa kugula talin doona mashiinada leysarka iyo codsiyada si ay kaaga caawiyaan inaad sameyso xulashada saxda ah ee xalka wax soo saarkaaga si aad ula kulanto baahiyahaaga hadda iyo mustaqbalka.
Macaamiisha la siiyo farsamo xirfadeed, codsi iyo la-talin qiimo leh (Email, Telefoon, WhatsApp, WeChat, Skype, iwm). Si dhakhso leh uga jawaab wixii su'aalo ah ee macaamiisha ay ka walwalsan yihiin, sida: ka shaqaynta laser-ka ee kala duwanaanta ku saabsan dalabidda agab kala duwan, xawaaraha farsamada laysarka, iwm.
Tijaabada walxaha oo bilaash ah
Sii tijaabinta qalabka leh mashiinadeena leysarka ee awoodaha laysarka ee kala duwan iyo qaabeynta warshadaha gaarka ah. Markaad soo celiso shaybaarkaaga la farsameeyay, waxaan sidoo kale bixin doonaa warbixin faahfaahsan oo loogu talagalay warshadahaaga gaarka ah iyo dalabkaaga.
Faahfaahin dheeri ah
Soo dhaweynta Kormeerka
Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa macaamiisha inay soo booqdaan shirkadeena wakhti kasta. Waxaan u fidinaa macaamiisha shuruudo kasta oo ku habboon sida cuntada iyo gaadiidka.
CO2 magaabay wiil Laser
Mashiinka Lasvo Galvo
Xuquuqda daabacaadda © 2005-2021 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.